NY IRAY amin’ireo toerana nalehan’ny olona mba honenana taorian’ny Safodrano dia nantsoina hoe Ora. Tonga tanàna lehibe nanana trano sasany nahafinaritra izy io. Nefa dia mpivavaka tamin’ny andriamani-tsy izy ny olona tao. Ny mponina tany Ora sy Babela dia tsy mba sahala amin’i Noa sy Sema zanany lahy izay nanohy nanompo an’i Jehovah hatrany.
Farany, 350 taona taorian’ny Safodrano, dia maty i Noa nahatoky. Roa taona tatỳ aoriana dia teraka ny lehilahy izay hitanao eo amin’ny sary. Tena olona niavaka tokoa izy teo anatrehan’Andriamanitra. Abrahama no anarany ary nonina niaraka tamin’ny fianakaviany tao amin’ny tanànan’i Ora izy.
Niaraka tamin’i Abrahama ny sasany tamin’ny fianakaviany rehefa nandao an’i Ora izy. Anisan’izany i Tera rainy. Toy izany koa i Lota zana-drahalahiny. Mazava ho azy fa nandeha koa i Saraha vadin’i Abrahama. Tonga tao amin’ny toerana iray nantsoina hoe Harana izy rehefa nandeha ny fotoana. Tao no maty i Tera. Lavitra be an’i Ora izy ireo izao.
Rehefa 99 taona i Abrahama, dia hoy i Jehovah: ‘Mampanantena aho fa ho tonga rain’ny firenena maro ianao.’ Ahoana anefa no hetezan’izany, satria efa antitra loatra izao i Abrahama sy Saraha ka tsy afaka hiteraka?
Hizara Hizara Abrahama: Sakaizan’Andriamanitra
my tant. 13